नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ पुग्यो – BFM 91.2
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ पुग्यो
विराटनगर, २६ असार । आज नेपालमा १ सय १८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न २५ वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा १ सय १८ जना संक्रमित थपिएका हुन् ।
आजमात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ४२ जना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा २८, ललितपुरमा १३ र भक्तपुरमा १ जनामा संक्रमण देखिएको हो । आजसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
आज पीसीआर विधिबाट ४ हजार ८ सय ६ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ । आजसम्म २ लाख ७५ हजार ९ सय ५१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताउनुभयो । देशभरीका क्वारेन्टिनमा २३ हजार ९ सय १० जना रहेका छन् ।
विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा ८ हजार ६ सय ३ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । आज १ सय २० जना गरी आजसम्म ८ हजार ११ जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
प्रदेश १ मा आज ३ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । इलाममा १ र पाँचथरमा २ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्या ७ सय ७ पुगेको छ ।
← मोरङ र झापाका केही क्षेत्र बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा
सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायीको निर्णय →
विश्वभर कोरोनाबाट ५ लाख ६८ हजारको मृत्यु
February 27, 2020 February 27, 2020 Bfm	0